ISKU HAYSASHO XIL GARAADNIMO OO DHALISAY KHILAAF IYO ISRASAASAYN | Toggaherer's Weblog
ISKU HAYSASHO XIL GARAADNIMO OO DHALISAY KHILAAF IYO ISRASAASAYN
YUSUF CIISE TALAABO OO MAALINTII SADEXAAD KU XANIBAN GAROORNAKA DIYARADHA EE DUBBIA
Posted by: toggaherer on: June 13, 2009
Magaalada laascaanood ayaa shalay waxa ka dhacay xasilooni daro iyo rasaas xoogan taas oo horseedi gaadhay in dagaal sokeeye uu ka qarxo magaaladaas, ka dib markii ay cirka isku shareertay xiisad ka dhalatay saddex nin oo walaalo ah oo u tartamayay garaadnimada beesha jaamac siyaad oo ka mid ah beelaha dega gobolka sool, jagadaas oo uu hore uga geeriyooday aabahood oo lagu magacaabi jiray Garaad Ismaaciil ducaale.
Xiisada ayaa cirka isku shareertay sida la sheegay ka dib markii ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa qaranku goobtii ay ka socotay doorashada garaadku oo ka socotay badhtamaha magaalada Laascaanood. Ciidamada weerarka ku qaaday goobta ay ka socotay doorashada garaadku ayaa la sheegay in ay taageersanaayeen laba ka mid wiilasha uu dhalay garaadka geeriyooda ee u tartamayay jagada uu aabahood baneeyay.
Haddaba, dadwayne tiro badan oo isugu soo baxay goobta lagu dooranayay garaadku ay iyaguna taageersanaayeen garaadka la doortay, taas oo sababi gaadhay isku dhac ciidamada iyo dadka shacabka ah.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen 48 xubnood oo 8 ka mid ahi ay yihiin cuqaal beesha jaamac Siyaad ayaa la sheegay in lagu doortay garaadka beesha Jaamac Siyaad in uu noqdo Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale oo ah mid ka mid ah wiilasha uu dhalay garaadka geeriyooday.
Haddaba, Weriye Saleebaan Ibraahin Xaashi oo xalay khadka telefonka kula xidhiidhay Xoghayihii shirgudoonka hogaaminayay shirkaasi lagu doortay garaadka cusub Maxamed Jaamac Saadle oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa waxa uu waydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo shirkaa Garaadka lagu doortay iyo sidii jawiga goobta doorashadu ka socotay ay ahayd waxaanu yidhi, “Waxaanan ahaa xoghayntii shir gudoonka, shirkii lagu doortay garaadka, shirkaasi lagu doortay garaadkuna wuxuu soconayay, muddo shan cisho ah, shirkaa waxa fadhiyay 48 xubnood, kuwaas oo kala ahaa sideed caaqil oo metela beesha jaamac siyaad waxayna soo doorteen sideedaa caaqil, 40 xubnood oo caaqilkiiba uu soo doortay shan xubnood, 48ka xubnood ayaa shirka fadhiyay, waxaana lagu dooranayay garaadkii beesha jaamac siyaad, markii uu dhintay garaadkii ka horeeyey laba sano ka hor, garaadkaa dhintayna wuxuu ka tagay sideed wiil oo uu dhalay, sideed nin oo hana qaad ah ayay noqdeen. Waxaana dhacday inuu mid waliba yidhaahdo waxaan doonayaa garaadnimo, waxayna noqotay in la kala doorto, sideeda nin oo kii beesha hogaamin karayay la doorto. Markaa tartan ayaa loo qaaday, tartankiina saddex nin ayaa ku soo baxay, oo yidhi waxaanu u taaganahay doorashada garaadka beesha, saddexdaa nin oo la kala yidhaahdo, cabdi garaad ismaaciil ducaale iyo maxamed garaad ismaaciil ducaale iyo jaamac garaad ducaale.
Saddexdaa nin ayaa cod loo qaaday waxaana u qaaday 48kii xubnood ee shirka fadhiyay, jaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa helay 47 xubnood codkii la qaaday, labadii kale midina waxba muu helin, midina hal cod buu helay markaa guushu waxay raacday jaamac garaad ismaaciil. Halkaasaana lagu go’aamiyay loona gartay inuu noqdo garaadkii beesha jaamac siyaad” waxa uu intaasi ku daray xoghayihii shirkaasi, Maxamed Jaamac oo uu ku eedeeyay maamulka gobolka Sool inuu gacanta kula jirey shirkaa lagu dooranayay garaadka waxaanu yidhi “Intii uu shirkaasi socday waxa gacanta kula jirey maamulka gobolka Sool, ama ciidan ha ahaato ama maamul ha ahaato, waxaana dhacaysa in maalin kasta hujuun lagu soo sameeyo goobtaa ay fadhiyeen guurtida shacabka ahi, manta oo ugu dambaysay maanta (shalay) waxa soo weeraray ciidan milateri ah. ciidankaa milateriga ahi waxay shirka ku sameeyeen qas, balse looma joojin ee waa la sii waday shirka, wax dhibaato ahi may dhicin rasaasna way rideen dadka qaarna way aflagaadeeyeen, markii dambena way iska tageen baabuur badana jidkii ayay ku xidheen. Baabuur badan oo tikniko ah oo ciidamo saran yihiin ayay soo geliyeen magaalada, ciidankaas oo ahaa mid ka tirsan ciidanka”.
Maxamed jaamac waxa uu ka dhawaajiyey in dadka ka soo horjeeda shirkaasi ay suuqa ka ururiyeen dad kale oo uu sheegay inay iyaguna sheegeen inay dooran doonaan garaadka ay doonayaan”.
Xoghayaha shir gudoonka shirka lagu doortay garaadka cusub, oo la weydiiyay ujeedada iyo waxay doonayeen ciidamada uu sheegay inay soo weerareen madashii garaadka lagu dooranayay ayaa yidhi “ujeedada ciidamadu noo soo hujuumayay waxay ahayd sadexda nin ee ilma garaad ismaaciil mid ka mida ama labada ayaa ahaa qaar ku xidhan xagaa ciidamada.”
Mar la weydiiyey bal saddexda nin ee uu sheegay inay sharaxnaayeen waxa uu yidhi “qasab may ahayn inay goob joog noqdaan, waxay ahaayeen in saddexdaba loo codeeyo, saddexdoodaba waxa u yaalay saddex bushqadood, shir gudoonka ayaana mid kasta magaciisa yeedhinayay. Markaa saddexda midna muu joogin markii la codaynayay. Mar uu ka jawaabayay su’aal ahayd cida ay u tuhunsan yihiin inay ka dambeeyaan taageerada labada xubnood oo aan iyaga loo dooran garaadka ayaa yidhi “Anagu inay taageerada dawlada wataan ma garanayno, laakiin waa arrimo siyaasadeed waxaas oo kale laakiin waxaan kuu sheegayaa inay labadaa nin dhaqanka ka baxsanaayeen, waxaanu u arkaynay inay ahayd arrin ciidan, ujeedadeeduna waxay ahayd haddii aan la dooran labadaa nin shirku ma dhacayo”.
Mar uu ka jawaabayay rabshado la sheegay inay ka dhaceen magaalada Laascaanood, ogaalkiisa khasaaraha ka dhashay waxa uu ku jawaabay “ma ogi cid khasaare ka soo gaadhay laakiin waxaan ogahay in dad la qabqabtay oo la xidhay, oo lagu xidhay fadhiisinka guutada todobaad, oo aan weli la gayn saldhig boolis. Mar la weydiiyay inay dawlada u gudbiyeen cabashadooda ciidanka uu sheegay inay soo hujuumeen waxa uu yidhi “Intaa waanu hadlaynaa intaa waanu dacwoonaynaa, cid jawaab saxa na siisana maanaan helin”.
Mar uu ka jawaabayay xoghayaha shirkaas inay jiraan tuhumo ah in garaadka la doortay iyo ka aan la dooranba ay kala taageerayaan maamulada Somaliland iyo Puntland waxa uu yidhi “Puntland wax shaqo ah kuma laha gobolka Sool, shacabka jooga Puntland lama socdaan lama shaqeeyaan, maamulka Somaliland ayaa xukuma oo ay hoos yimaadaan, dawlada Somaliland ayaana ku tacadiyaysa siday doontana ka yeelaysa reer Sool. Maamulka gobolka Sool ayaan ilaa oo aanu isku danaynay in aanu xidhiidh la samayno ayaanay noo suurto gelin in aanu ku helno khadka telefoonka oo aanu ku baadi doonay si aanu wax uga ogaano xiisada ka taagan gobollkaas